Kheyre oo ay 60 saac kaliya uga hartay inuu xukuumada horgeeyo BF - Caasimada Online
Home Warar Kheyre oo ay 60 saac kaliya uga hartay inuu xukuumada horgeeyo BF
Kheyre oo ay 60 saac kaliya uga hartay inuu xukuumada horgeeyo BF
Muqdisho (Caasimada Online) – Ra’isulwasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa dhexda ka galay jawi siyaasadeed oo aad u qasan tan iyo markii uu soo magacaabay golaha wasiirada, waxaana hadda soo fuulayo culeys weyn kadib markii ay kusoo dhawaatay waqtigii laga rabay inuu Baarlamaanka Soomaaliya horgeeyo qorshaha iyo barnaamijka xukuumadiisa cusub ee aan weli la ansixin.
Ra’isulwasaaraha Soomaaliya ayaa loo sheegay 1 March oo aheyd maalintii la ansixiyey inuu Baarlamaanka Soomaaliya horkeeno Barnaamijkiisa shaqo ugu dambeyn 31 Marc h, waxaana hadda ugu dhiman saacado kooban oo gaarayo ilaa 60 saac.
Ra’isulwasaaraha Soomaaliya ayaa ku mashquulay arrinta wasiirada oo uu culeys xooggan kasoo fuulay kadib markii ay ku kaceyn xildhibaano uu soo abaabulay Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya oo la sheegay inuu liiska wasiirada ka waayey Fargeeti oo uu la rabay in laga dhigo midkood wasaaradaha Maaliyadda iyo Dibadda.
Dhawaan ayey aheyd markii Ra’isulwasaaraha Soomaaliya uu guddi heer wasiiro ah u magacaabay inay fiiriyaan oo ay dib u eegis ku sameeyaan qorsho howleed uu isaga sameeyey, balse wuxu arrintaas kaga mashquulay dhibaatada ka qabsatay wasiiradii uu soo magacaabay.
Waxaa xusid mudan in Guddigii howshaas loo xil saaray ay mar hore qabteyn shaqadii loo diray ee aheyd indha indheenta qorshaha golaha wasiirada.
Guddoomiyaha Baarlamaanka Soomaaliya oo waraaq dhawaan u diray Ra’isulwasaaraha Soomaaliya ayaa qeybaha ugu dambeeyo ku xasuusiyey in laga doonayo qorshaha xukuumadda cusub xilligii lagu balamay ee aheyd 31 March.